भाउजू र छोरी सँग चिकेको कथा - nepali chada katha - Nepali Sex Tube
भाउजू र छोरी सँग चिकेको कथा – nepali chada katha
December 11, 2021 November 20, 2021 by Nepali Tube
ऊ सानैदेखि मसँग खुब चल्थी । पछाडिबाट आएर पलाई भ्वाक्क हिर्काएर हिड्थी । सारै चञ्चले थिई कबिता । म जागिरे भएको दुई वर्षपछि गाउँबाट काठमाडौं फर्कदा ऊ त्यतिखेर घरमा थिइन ।
मैले पहाडबाट सुन्तला जुनारसहितका सिजनको फलफूल लिएर गएको थिएँ । कबिता खोइ भाउजू भन्दै म उसको घर पुगें ।”ओहो समीर बाबु पो” भन्दै घिमिरिने भाउजू निस्किइन । मैलै आफूले ल्याई दिएका फलफूल थमाएँ । घिमिरिनी भाउजू त्यतिखेर पातलो गाउनमा थिइन । उनका छातीमाथि पहिलो पटक नजर पुग्यो । “ओहो कति ठूला दूध” अनायस मेरो मुखबाट निस्क्यो । “क्या हो समिर बाबु त जागिरे भएपछि जे पायो त्यही बोल्न थाल्नु भएछ” कोपिला नाम गरेकी भाउजू अनमस्क हुदै जवाफ फर्काइन । ओ हो मैलै त बोल्न नहुने कुरा बोलेछुभन्दै म लाज र ग्लानीले भुतुक्क भएँ र फर्कन थाले । “समिर बाबु कहाँ हिड्नु भएको म चिया बनाएर ल्याउँछु” भन्दै कोपिला भाउजू भित्र भान्सातिर लागिन । म भने उनीहरुको ड्रइङ रुममै बसेर पर्खन थालें ।
तनहुँतिर कुनै गाउँमा घर भएका विनोद दाई अन्तःशुल्क कार्यालयमा सुब्बा थिए । अन्तः शुल्कका सुब्बा मात्र भए पनि उनको काठमाडौंमा महल भन्न सुहाउने भब्य घर थियो बैंकहरुमा लाखौंको ब्यालेन्स थियो । ठूल्ठूला व्यापारीहरुसँगमात्र उनको संगत थियो त्यसैले उनको घरमा थोरै मात्र बास हुन्थ्यो । बिनोद दाई बाहिर खुब केटी घुमाउँछन अरे भन्ने मैले धेरै अगाडि देखि सुनेको थिएँ । हेर घरैमा यति राम्री स्वास्नी हुँदाहुँदै बिनोद दाई बाहिर के बरालिएका होलान म सोच्न थालें । त्यतिखेरसम्म कोपिला भाउजूले चिया बनाएर ल्याइसकेकी थिइन । “अनि समिर बाबु जागिरको अनुभव कस्तो रह्यो त” चियाको एउटा कप मलाई थमाउँदै अर्को कप आफैले लिएर सोफामा मेरो छेउमा बस्दै कोपिला भाउजूले भनिन । “आ भाउजू सारै दुःख पहाडको ठाउँ धेरै हिड्नु पर्ने । मामाको करले जागिर खाई हालियो । म त अब जान्न” मैले दुःख दर्साउँदै भने ।”आम्मुई त्यस्तो के भन्नु भएको बाबुले पाएको जागिर पनि कहीँ छोड्नु हुन्छ” उनले भनिन । “अब त जागिर खाएर घरबार गर्नुपर्छ ।”
“भाउजू के अहिलेनै बिबाह गर्नु” मैले भने । “अर्काकी स्वास्नीको दूध हेरेर मुख मिठ्याउनुभन्दा त आफ्नै ल्याए राम्रो नि” उनले छिल्लदै भनिन ।जिल्लामा आइमाइको शरिरको स्वाद लिइसकेको मलाई यो कुराले हौस्यायो । “के गर्ने मुख मिठ्याउने मात्रै त हो नि” मैलै प्रसंग जोडें । त्यतिखेरसम्म उनले आफ्नो गाउनको खिप खोलिसकेकी रहिछिन । मस्तका दूधका पोकाका बीच बनेको आकर्षक खाल्डो प्रस्ट देखियो । “लोग्ने कहिले घर बस्ने होइन । दुई जना आमा छोरीमात्र भएको ठाउँमा … हेर्नु बाबु बोक्सी लागेर बसिखान दिएका छैनन”उनले प्रसंग मोड्न खोजेजस्तो मलाई लाग्यो । टोलमा इमान्दार केटाका रुपमा चिनिएको मैले अलि सहज अनुभव गरे र भने “हे भाउजू तपाईजस्तो पढे लेखेको मान्छे पनि बोक्सीको कुरामा विश्वास गर्ने।” “नपत्याउनु भएको ल हेर्नुस” मेरो नजिकै आएर आफ्नो गाउन उचालेर सेता तिघ्रा मतिर फर्काएर अलि कति निलो भएको ठाउँतिर देखाउँदै उनले भनिन । अघि बटम खुलेको छाती देखेरै औडाहा भएको मेरो मन झन उनले आफ्नो कापै नजिक पुर्याएर गाउन फर्काएपछि अधैर्य हुन थाल्यो । उत्तेजनाले मेरो स्वास फुल्न थाल्यो ।
त्यही पनि संयमित भएर मैले भने “के को बोक्सीले खाएको हुन्थ्यो नशा चेपिएर रगत जमेर यस्तो भएको नि” मेरो जवाफ फर्कन नपाउदै उनले एकै पटक मप्रति आक्रोसित हुँदै भनिन “आइमाइको कुरा पनि नबुझने, कस्तो मान्छे हौ समिर .. तपाई त कि छैन सामान “समिर बाबुबाट एकै पटक “बाबु” झिकेर मेरो पुरुषोत्वमाथि आक्रमण भएपछि मैले पनि झ्वाँक्कीदै आफ्नो लाडो बाहिर निकालिेर “छ कि छैन लु हेर” भने । उ आएर च्याप्प मेरो उत्तेजित लाडो च्याप्प समातेर मलाई त्यहीं सोफामै धकेलेर आफ्नो छाती दल्न थाली ।”कोपिला तिम्रो लोग्नेले थाह पायो भने मलाई मार्ला नि” मैलै उसको चिउडों आफूतिर फर्काएर भने “साला नार्मद । महिनाभरि बेपत्ता हुन्छ । कुन कुन छँडुल्लीहरुसँग बाहिर चरिहिन्छ । घर आउँदा मलाई चलाउछ चलाउँछ एकछिन पनि नगरी खल्यातखुलुत्त झारेर सुत्छ । हाम्रोचाँही मन हुँदैन हामीलाई भोक लाग्दैन । खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुखले के खान्छ नि”पूर्ण उत्तेजनामा आएकी कोपिलाले मेरो लाडो खेलाउँदै भनिन ।त्यसपछि म उनका दूध माड्न थालें ।
वास्तवमै उनका स्तन गज्जबकै थिए । एक हातका पाजामा नउटाउँने । मस्तका ती गिला गिला दूध माड्नमा अति मज्जा थियो । उनले मलाई सोफामा लडाइन र आफूलाई जन्मजात नांगो पार्दै मेरा कपडा पनि बिस्तारै खोल्न थालिन । उनी भोकाएकी सिंहिनीजस्ती थिइन जसलाई भोजनको मात्र चाह हुन्छ । मेरो ओठ चुस्दाचुस्दै उनले उत्तेजित भएर यति कस्सरी टोकिन कि मेरो ओठमा घाउनै भयो । म पनि के कम । उनको स्तन मजाले चुस्न थाले। । एउटा बच्चा पाइसकेको उनको दूध बच्चाले चुस्न छाडेको धेरै वर्ष वितिसके पनि मैले चुस्न थालेपछि पग्रियो र मुन्टाबाट दूध रसाउन थाल्यो । त्यो तत्म्याइलो गुलियो दूधले मेरो उत्तेजनामा घ्यूको काम गरयो । अब उनी र म जन्मजात नांगो भएर एक अर्कासँग सर्प लठारिए झै लठारिएका थियौं । चुस्ने चाट्ने माड्ने र खेलाउने क्रम जारी थियो। म उत्तानो थिएँ । उनी ममाथि चढिन र आफ्नो पूती फैलाएर मेरो लाडो हातले समातेर ख्वात्त छिराइन । उनको पूतीले पानी मजाले फयांकीसकेको रहेछ मेरो लिग त्यो सरोवरमा सजिलै डुब्यो । अब उनी माथिबाट मजाले हल्लिन थालिन । स्वाँ…ऽऽऽऽस्वाँ…ऽऽऽऽसमिर मेरो राजा॥ ऽऽऽऽऽऽऽआज मलाई पूर्ण गरिदेउ…ऽऽऽऽऽऽऽम त्यसका लागि जे मूल्य पनि चुकाऽऽऽऽउँछु…ऽऽऽऽऽस्वाँ…ऽऽऽऽस्वाँ…ऽऽऽउफउनी तलमाथि गर्दै आफ्नै सूरमा बर्बराँदै थिइन ।
म भने उनको पूर्णाकारको कप सम्हाल्न व्यस्त थिएँ । १० मिनेटजति उनी चढेर मच्चिएपछि मेरो उत्तेजना पनि चरम शिखरमा पुग्यो । आइमाई माथि चढेर के पूर्ण मज्जा आउँथ्यो । अब मैलै उनलाई आफूमाथिबाट तल झारें र मेरों लाडो एक छिनलाई बाहिर निकालेर उनको पूतीमा औंला छिराएर खेलाउन थालें । “ओहो समिर एक्सपर्ट पो रहेछौ त आइमाइलाई कसरी सन्तुष्ठ पार्ने भनेर जानेका रहेछौ” उनले भनिन । “तिमीले मेरो पुरुषत्वमाथि चुनौती दिएपछि मैले आफूले जानेको त गर्नै परयो नि मेरी रानी” उनका पुक्क परेका गाला टोक्दै मैले भने ।
अब उनी उत्तानो थिइन । उनको पूती भित्री रस चुहिएर छप्पक्कै थियो । मेरो आठ इञ्चको लाडो लगेर पूतीको मुखमा राख्न नपाउँदै हिले माछा दूलोमा छिरेजस्तै स्वाट्टै भित्र पस्यो ।
त्यो समुद्रमा मेरो लाडोले डुबुल्की मार्दा अर्को संसारको आनन्द आइरहेको थियो । म जति जति लाडोलाई भित्र बाहिर गर्थें उनी आनन्दले हलुका चित्कार मार्दै भनिरहेकी थिइन ।मेरो…ऽऽऽऽऽराजा…ऽऽऽऽऽऽअरुऽऽऽऽऽआहा…ऽऽऽऽऽऽऽसि…ऽऽऽऽऽऽसि…ऽऽऽऽऽअरु कस्सेर…ऽऽऽऽऽऽमच्चाउ…ऽऽऽऽऽदेउ न देउ…ऽऽऽऽऽऽम मर्छु…ऽऽऽऽऽऽऽऽसाला विनोदेले मलाई भोकै राख्यो…ऽऽऽऽऽऽऽतिमीचाँही …ऽऽऽऽऽऽऽबीचऽऽऽऽऽऽआहाऽऽऽऽऽमा नछोड है…। “हुन्छ रानी हुन्छ” भन्दै म उनका दुई हातले पनि नभ्याउने दूध माड्दै चिक्दै गर्न थाले ।
ख्वात……..ख्वात……..ख्वात…….ख्वात……ख्वात्ततततत…….ख्वाततत…….ख्वात…..मेरो धक्काको स्पीड बढ्न थाल्यो । मेरो लाडोले जतिजति उनको जी स्पटमा धक्का दिन्थ्यो उनी त्यतिनै मेरो ओठ गाला घाँटी चाट्न चुस्न थाल्थिन । जति जति धक्का मार्थें उत्तिउत्ति भित्रै पस्न मन लाग्थ्यो मजा आउने क्रम जारी थियो झन्डै आधा घण्टापछि मेरो लाडोले चरम उत्कर्षमा आएर सलाम गरयो र कुनै कथामा भनिएजस्तो मजाले विर्य “फच्याक्क फच्च…फच्च…फच्याक” अर्काकी स्वास्नीसँग सम्भोगको पूरा आनन्द लिएर म कपडा लगाउन थालें ।
उनले पनि मेरो विर्यले लतपत भएको विर्य पुछ्दै भनिन “समिर आज बल्ल म पूरा आइमाई भएँ । मेरो लागि तिमीले ठूलो गुन गरयौ । अबदेखि बेला बेलामा आएर मलाई यस्तै आनन्द देउ है ।” “भइहाल्छ नि तर मेरो लागि पनि तिमीले केही गर्नुपर्छ नि” उनको ओठमा मजाले आफ्नो ओठ जोड्दै मैले भने् । उनले पनि “हुन्छ म ।जे पनि गर्छु” भनेर मलाई जोडले अंगालो मारिन । त्यसपछि घिमिरेको घरमा जाने क्रम जारी रह्यो । मलाई जतिखेर संभोग गर्न मन लाग्थ्यो म छिमेकीको घर पुग्थें । उनी पनि कपडा खोलेर तयार हुन्थिन चाहे बिहान होस दिउँसो या बेलुका ।आमालाई संभोग गर्दा गर्दा तेह्र वर्षकी उनकी छोरी कबिताप्रति मेरो लोभी मन आकर्षित भइहाल्यो । एक दिन १० १५ मिनेटसम्म ओठ चुस्ने दूध चुस्ने दूध खेलाउने गरेर उनलाई पूर्ण उत्तेजनमा ल्याइसकेपछि संभोगकै क्रममा कोपिलालाई मेरो मनको कुरा भने ।
“आमुईऽऽऽऽऽके भनेको त्यस्तो कलिलो बच्चालाई” उनले त्रसित हुँदै भनिन । उनी पूर्ण उत्तेजनामा थिइन । म पनि उत्तेजित भइसके पनि “उसो भए तिमीजस्ती एउटा बच्चा ब्याइसकेकी बूढीलाई मात्र संभोग गरेर मेरो लाडोलाई यातना कति दिनु” भन्दै कपडा लगाएजस्तो गर्न थालें । “ए राजा नरिसाउन न । ल तिम्रै जीत म वातावरण मिलाई दिन्छु । फकाएर आफै गर्नु बीचमा मलाई सोझै दोषचाँही नआओस नी” उनले समातेर आफूतिर तान्दै भनिन ।त्यो दिन पनि उनलाई सन्तुष्ठ बनाएर म आफ्नो घरतिर फर्के ।स्कूल विदाको मौका पारेर एक दिन म घिमिरेको घरमा आफ्नो कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्न भनेर छिरें ।
सदैझैं कोपिला घरमै थिइन कविता पनि टीभीमा कार्टुन हेर्दै थिइन । म गएर उनीहरुको सोफामा बस्ने वित्तीकै कविता चल्न आइपुगिन । फुच्ची घरी मेरो कान तान्थी घरी उसको गुडिया मेरो मुखमा दल्दिन्थी । केटीका भरखर उठेका दूधका मुन्टा टीसर्टबाट प्रस्ट देखिइरहेको थियो । पल्केको झिल्के घरीघरी मिल्के भनेझै मेरो पापी मन उद्वेलित हुन थाल्यो । मैले कोपिलालाई आँखा सन्काएँ । “ए कबु तिमी अंकलसँग बस्दै गर है म मासु पसलसम्म पुगेर आउँछु”भन्दै कोपिला बाहिर निस्किइन । “आज मासु ल्याउने हो मम्मी” उसले बालसुलभ प्रश्न गरी ।
“हो” कोपिलाको मुखबाट डर मिश्रित स्वर निस्कियो र उनी घरबाट बाहिर पनि निस्किइहालिन । आमा निस्केपछि कविता फेरि मसँग चल्न थालिन । चल्दाचल्दै दुबै हात च्याप्प समातेर “कति चल्छौ हँ स्वास्नी बनाउँछु अनि” भने । “जान्छु होलायस्तैसँग” भन्दै मेरो हातमा दुख्ने गरी चिमोटेर उनी बेड भएतिर भागिन । म मूडमा थिएँ । उसैका लागि भनेर ठूलो खालको क्याटबरी ल्याइदिएको थिएँ । “यी लेउ क्याटबरी” पकेटबाट क्याटबरी झिक्दै मैले उनलाई आफूतिर आकर्षित गरे । १४ वर्षकी किशोरी चक्लेट भनेपछि आकर्षित भइ हाली । ूक्याटबरी खाने भए त मेरो काखमा बस्नु पर्छ निू मेरो प्रस्ताव थियो ।”हस” भन्दै ऊ आई । मैले उसलाई क्याटवरी थमाएर आफ्नो काखमा राखें ।
उ क्याटवरीको र्यापर खोलेर अलिअलि गर्दै खान थाली । म भने उसको भरखर उमि्रएका दूधमा हात पुर्याएर पञ्जाले विस्तारै थिच्न थालें । दुई चार पटक विस्तारो विस्तारो थिच्दा उसले कुनै प्रतिक्रिया नजाएपछि मेरो हौसला बढ्यो र दूध मोल्ने क्रम बढाएँ । मेरो लाडो उत्तेजित हुन थाल्यो । यी सब कुराबाट अनभिज्ञजस्तो हुँदै ऊ भने क्याटबरी खाइरहेकी थिई । “मलाई चाँहि क्याटवरी नदिने” दूध माड्दै मैलै भने । “यी लिनुन त”क्याटवरीको एक टुक्रा भाँचेर दिदैं उसले भनी ।”म त तिम्रो मुखभित्रबाट खाने”मेरो भनाई सुनेर ऊ हाँसी । “छ्या जुठो पनि खान्छन त” उसको भनाई थियो । “खाइहाल्छु नि ल मुखमा राख मात्रै} मैले भनें । उसले दाँतले टोकेर मतिर मुख दिई । मलाई क्याटबरी खानु त के थियो र । उसको कलिलो ओठ चुस्नु थियो । कलिला ओठ त्यसमाथि क्याटबरीको गुलियो लागेको । मेरो उत्तेजना चरम बिन्दूमा पुग्यो ।
यतिखेरसम्म उसलाई काखमा राखेर उसको हिपमा मेरो लाडोलाई दलिरहेको थिएँ । “कबिता अब छिराउँ है” उत्तेजनाले चरम सीमा नाघेकाले मैले भने । भनिन्छ केटीहरुमा १२ वर्षदेखिनै यौन चाह आउन थाल्छ । मैले १०/१५ मिनेटदेखि दूध मोल्दै पछाडिबाट दलेकाले उसका पनि गाला राता हुन थालिसकेका थिए । उसले फ्रक खोली । भरखर उम्रन थालेका कैला रौ पुक्क परेको पूती । यो देखेर मलाई त कतिखेर छिराउँ भयो ।उसलाई बेडमा उत्तानो पारें । “विस्तारो ल अंकल दुख्छ” मैले उसका तिघ्रा फैलाएर मेरो लाडो पसाउनै आँटेको थिएँ । उसले भनिहाली । “पहिले पनि यस्तो गरेकी थियौ र” मैले आफ्नो लाडोले उसको पूतीमा छुँवाउँदै सोधें । “अँ एक पटक सूरजसँग” उसले भनी । ओहो १४ वर्षकी केटी स्वाद लिन भ्याइसकेकी मनमनै मलाई लाग्यो । “को सूरज” मैले धक्का मार्दै सोधें । “मेरो स्कूलको सा…………थी…………।ऐया…॥दुख्यो क्या” एक पटक ढोका खुलिसकेको उसको कलिलो पूतीमा मेरो पहिलो धक्कामै लाडो स्वाट्टै पस्यो ।
म माथिबाट धमाधम धक्का दिन थालें । “कच्याकऽऽऽऽऽ कच्च…ऽऽऽऽऽकच्चऽऽऽऽऽक्वाँच…ऽऽऽऽऽक्वाँच””अंकल…ऽऽऽऽपोल्योऽऽऽऽऽऽप्लिज…ऽऽऽऽऽझिक्नुन न हजूरको ॥ऽऽऽऽऽमरे…मम्मि हौ” उसको मुखबाट चित्कार निस्किइरहेको थियो । “पखन कब्बु एक छिन त हो नि …। म तिमीबाट पूरा आनन्द लिन्छु…एकछिन सही देउन”भन्दै मैले आफ्नो ओठ उसको मुखमा जोडेर उसको ओठ चुस्न थालेँ । उसको कलिलो छातीका दूध पनि माड्दै थिएँ । उत्त्जना झन झन बढ्दै थियो। उसको मुखबाट “गूँङ,,,,गुङ” निस्कदै थियो । ऊ केही भनिरहेकी थिइ तर मेरो मुख उसको मुखैमा जोडिएको र म उस्को जीब्रो चुसिरहेकोले आवाज आइरहेको थिएन । २० मिनेट मच्चिएपछि मेरो लाडो स्खलित भयो। फच्याक्क…।फच्च…फच्चू । स्खलित भएपछि यसो हेरेको त केटी पीडाले बेहोस भइछे ।
कस्तो लग्यो साथी यो कथा ? कमेन्ट गर्नु होला ! तपाइको पनि यस्तै घटना हरु छन् भने हामीलाई पठाउनु होला ।
Categories Nepali Sex Story, New Sex Story, नेपाली यौन कथा, नेपाली सेक्स स्टोरी, यौन कथा Post navigation